Gbasara anyị - Ningbo Runner Co., Ltd.
NINGBO ỌR R
Ningbo Runner, nke hibere na 2002, bụ ụlọ ọrụ enyemaka nke Runner Group. Anyị bụ otu n'ime ndị na-eduga ndị na-eweta ngwaahịa ụlọ, ma raara onwe anyị nye ịnye ngwọta kacha mma maka ndị ahịa anyị. Taa, anyị bụ ndị a keukwu emeputa tụnyere nnyocha, imewe & mmepụta, na centrally emi odude ke Ningbo bi 140,000 square mita nke n'ichepụta na nkwakọba ohere. Dabere na anyị ike tech nnyocha na elu-oru oma n'ichepụta ikike, na-adabako mmekọrịta anyị na ndị ahịa anyị, anyị wuru aha anyị n'ụwa nile, na anyị na ngwaahịa kpuchie North America, Europe, na Middle East na South America.
Ọkpọkọ HANGERS HVAC PLsa Plum ahịhịa AIR
Na-aga n'ihu ọhụrụ
Ningbo Runner nwere ọkachamara otu na ọtụtụ R&D engineer abuana ke ubi nke ọhụrụ ihe ọcha, imewe imewe, ebu imewe, akpaka akara, ule analysis na oru ngo management, na-enye oké nkwado maka WRN si onwe ha ọhụrụ na nkà na ụzụ rụzuru.
Elydabere na ya ike R & D otu na ọgaranya ahụmahụ na ngwaahịa mmepe na imewe, na Company si ngwaahịa n'ichepụta na àgwà akara nwere ike izute ndị ahịa na ahịa mma.
Companylọ ọrụ ahụ nọ na ọkwa nke mwebata na nkwalite nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntinye ozi. Ọ gafeworo n'ichepụta mmepụta edoghi dị ka nwere ọgụgụ isi ịkpụzi, green n'elu ọgwụgwọ na ọgụgụ isi nzukọ, ma jiri nwayọọ nwayọọ na-aghọta na ozi mwekota nke MES n'ichepụta egbu usoro, PLM usoro na ERP usoro, nakwa dị ka nnukwu-ọnụ ọgụgụ atọ akụkụ lọjistik center na ukwuu achikota usoro inye ihe iji nye ndi ahia ikike na mmasi kariri ndi ahia.